Sida loo maqli Spotify music on PC Spotify
Dhageysiga music Spotify ee PC waa uun feature kale Of Spotify oo siinaysaa miday iyo saamaxaya kuwa isticmaala u leedahay in kaliya ay helaan qalab kale in ay dhagaystaan ​​oo ay music jecel . Waxa u baahan in ay dhagaystaan ​​Music Spotify ku PC waa codsi in lagu rakibay on Computer. Had iyo jeer xasuuso in ay ku rakibidda Spotify sida codsi standalone, users heli doontaa waayo-aragnimo user aad u fiican oo tayo leh maqal ah oo u qalma in goobaha internet-ka. Oo sidaas waa dhegaysiga muusikada dhex Spotify ee pc siinayaa aragnimo cusub oo cajiib ah in dadka isticmaala ay.
Qeybta 1: Talooyinka Spotify pc download
Qeybta 2: Sida loo download music Spotify ee PC
Ujeedada PC Download, waxaad u baahan tahay in shuruudaha in maskaxda lagu hayo. Had iyo jeer xasuuso in Spotify ka qaadataa badan oo meel aad disk adag kaydinta ama si fiican loogu yeedhi sida khasnado ujeedada. Qiyaastii 5 GB oo ah meel bannaan oo disk adag tahay in la wada baabbi'iyey, waayo, isku mid. Ku dhawaad ​​50 GB oo ah meel disk waxaa looga baahan yahay dareen fiican adeegga music ugu jeceshahay in aad kombuutarka. Xitaa sida Spotify waa inay ku tiirsadaan oo ay leeyihiin feature weyn in ay si deg deg ah uga jawaabaan codsiyada aad, codsiga weli u baahan yahay wax badan oo ka mid ah kayd ah si loo farsameeyo codsiyada aad ee markii ugu dhaqsaha badan ee suuragalka ah. Sidoo kale wuxuu u baahan yahay Computer ah Memory RAM wanaagsan oo ugu yaraan 2 GB ee RAM loo baahan yahay waa hubaal. Nashqadda rasmi ah loogu baahan yahay ujeedada Spotify lagu soo koobay laga yaabaa in sida PC A socda Windows XP, Vista, ama 7 iyo xiriir ah qatka. Iyadoo ku Mac, looga baahan yahay in la soo koobay karaa sida Mac OS X 10.4.0 ama ka dib, internet sida daaqadaha iyo Ama G4 ah PowerPC ama wax ka sareeya, ama nidaam in waddaa processor Intel ah a.
Si aad u soo bixi Spotify ee PC, waxaad kala soo bixi rakibayo ee Spotify ee aad PC ka dibna si toos ah u soo dajiyo.
Free Spotify PC iyo pc premium Spotify
Ahaanshaha adeegyada ugu caansan ee qaybta Music, Spotify ka dalbaday in tirada rakibo weyn adduunka oo dhan. Iyadoo Spotify ee la heli karo ee version lacag la'aan ah iyo Premium, waxaa jira qaar ka mid ah Farqiga u dhexeeya labada.
Iyadoo Spotify Free ah, waxaa jira qaar ka mid ah la dhaafi karin la yimaado. Xudduudka ah qaab xayeysiis waa hore orodkiisu u ah marka ay timaado lacag la'aan ah version Spotify ah. Iyadoo version ka hodon Spotify, kala go 'Joogta haddii foomka xayeysiis, taas oo sii muuqday sida xayeysiis on TV waa mid ka mid ah waxa ugu niyad inuu qaado dhegeystayaasha in ay music ah. Iyadoo version xorta ah ee Spotify, tayada audio ka mid ah 160 kbps u desktop yimaado, taasoo loo arki karin midab tayada caadiga ah.
Pc premium Spotify
Marka aan ka hadlo pc ku premium Spotify, qaababka dhamaystiran oo Spotify ee si fudud loo tarin karo. Iyadoo xisaabta Spotify Premium ee PC, tayada sareeya audio ka mid ah 320 kbps si fudud tarin kartaa adigoo isticmaala iyo xayeysiis niyad ayaa sidoo kale fuuli off. Tani waxay ka saarida xayeysiis saamaxaya kuwa isticmaala in ay dhegeysato muusikada oo aan la dhexgelin kasta. Faa'iidada kale ee la xidhiidha Premium Spotify ee PC waa xarunta la siiyo dadka isticmaala si ay u dhagaystaan ​​music offline. Si kastaba ha ahaatee, Spotify Premium bixiyaan faaidooyin kale oo ah qaab jidaynayey dhagaystayaasha in muusiko dhegayso, meel kasta oo adduunka ah iyo in sidoo kale offline hab. Iyadoo isticmaalka interface wax Spotify, xarunta la tarin karo. Waxa kale oo aad ka heli kartaa oo maqla playlists, share music iyo playlists, ogaan music cusub, la abuuro iyo edit playlists, iyo dhagaysan Gurtida gaaray by feature Spotify Radio at version Desktop Premium ee Spotify.
Degsado Spotify ee PC waa sida soo degsado codsi kale oo kasta oo ku desktop. Duuban waxaa la samayn karaa website-ka rasmiga ah ee Spotify. Si kastaba ha ahaatee, xarunta kaydinta sare waxaa looga baahan yahay ujeedada dajinta ee Spotify, taas oo u baahan khasnado ugu yaraan 5 GB iyo waxqabadka fiican, ugu yaraan 50 GB oo ah Hard disk.
Talaabadda dajinta la raaco kartaa sida hoos ku qoran:
Just booqan guriga page Spotify ee www.spotify.com
Riix badhanka si cad u xuso 'Hel Spotify'
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad samayn in, lagugu hagi doonaa bog download
Dajinta ayaa si toos ah iyo bilaabmaa marka aad dhamayso soo dajinta, sanduuqa login ah u muuqataa aad shaashadda.
Waxaad arki doontaa wax doorasho ah in sanduuqa login oranaya ma User ah? Saxiix
Riix 'Saxiix' doorasho
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad riix qaybta kor ku xusan, daaqad cusub oo laga furay, kaas oo kuu ogolaanaya in aad kor u saxiixo oo isticmaalaya xisaab Facebook ah. Tani waxay u saamixi doontaa saaxiibadaada Facebook si aad u aragto waxa aad dhagaysanayso on Spotify
Haddii aad rabto in aad iska diiwaan Facebook, ku buuxi macluumaadka ku sanduuqyada bixiyo
Haddii aad doorato 'abuuraan xisaab adiga oo isticmaaleya isticmaale e-mail address', daaqad cusub furi doonaa oo u oggolaan doonaa diiwaan marayo cinwaanka email. Taas oo kaliya dari macluumaadkaaga shakhsiyeed ee sanduuqyada bixiyo
Markaas dooran aad doonayso inaad version saarka labada version bilaash ah ama version Premium. Waxaa jira tijaabo kale version kaas oo u ogolaanaya isticmaalaya muuqaalada premium 30 maalmood ee ugu horreeya oo aan lacag kasta
Riix badhanka orange oranaya download ah.
A icon Spotify ka muuqan doontaa desktop oo aad si guul leh uga dhigay xisaab.
Marka aad dhammaysato labada dhigay macluumaadka account, riix "Continue" button.
> Resource > Spotify > Sida loo Dhegayso Spotify Music on PC Spotify